Utshintsha njani umbala kwiAdobe Photoshop ngokukhawuleza kwaye kulula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Utshintsha njani umbala kwiAdobe Photoshop ngokukhawuleza kwaye kulula
Lola ifani | | Izixhobo zoYilo, Photoshop, Amaqhinga, Tutorials
I-Photoshop sisixhobo esihle sokutshintsha inyani kwiifoto zakho. Inkqubo ibonelela ngezixhobo ezikhulu zokutshintsha umbala wazo naziphi na izinto ezenza umfanekiso. Kule posi ndiza kukufundisa ukutshintsha umbala kwiAdobe Photoshop ngokukhawuleza kwaye kulula. Eli qhinga sisixhobo esihle kwaye, nangona lilula, ihlala inika Iziphumo ezilungileyo kakhulu.
1 Guqula umbala kwi-Photoshop usebenzisa imephu yegradient
1.1 Vula ifoto yakho kwaye wenze ukhetho
1.1.1 Ukukhetha kubalulekile
1.2 Yenza umaleko wemephu yegradient
1.3 Guqula kancinane iipropathi zomgangatho
1.4 Guqula umbala
1.5 Dlala ngomnyama nomhlophe
Guqula umbala kwi-Photoshop usebenzisa imephu yegradient
Vula ifoto yakho kwaye wenze ukhetho
Into yokuqala esiza kuyenza yile vula ifoto kwi-Photoshop sifuna ukuhlela. Kwimeko yam, into endingayithandiyo ngalo mfanekiso ngumbala wejezi yentombazana, ke ndiza kubakhetha ukuba bayitshintshe. Ngale nto ndisebenzise isixhobo Ukukhetha ngokukhawuleza y Ndicime ukhetho ngokusebenzisa imaski kwaye ngoncedo luka isixhobo sebrashi.
Wena ungasebenzisa isixhobo sokukhetha oyena ubalaseleyo, Ayinamsebenzi. Zama kwaye usebenzise eyona ilula kuwe kunye neyona inika iziphumo ezilungileyo xa ukhetha into ethile ofuna ukusebenza kuyo.
Eyona nto ibalulekileyo yokufumana iziphumo ezilungileyo xa utshintsha umbala kwi-Photoshop yile yenza ukhetho olufanelekileyo. Ngesi sizathu, ndincoma ukuba unikezele ixesha kule nyathelo kwaye usebenzise imaski yokukhetha ukuze icoceke kangangoko. Ndikushiya apha iposti evela kwi-Intanethi kwi-Intanethi equka inkcazo eneenkcukacha zokusebenzisa imaski yokukhetha.
Yenza umaleko wemephu yegradient
Nje ukuba ukhetho lwenziwe, inyathelo elilandelayo liya kuba yenza umaleko wemephu yegradient. Kwii-tab zongqimba, ezantsi, uya kufumana ifayile ye- isimboli esisangqa ekuvumela ukuba wenze iindawo zokugcwalisa kunye nokulingana. Cofa kwaye imenyu iya kuboniswa, fumana ifayile ye Imephu yeGradient.
Uya kubona ukuba kumaleko angasemva (kwifoto yakho) uyakube uyenzile umaleko omtsha ehambelana nemephu yegradient.
Guqula kancinane iipropathi zomgangatho
Kumaleko wemephu yegradient, yenza Cofa kabini kwi-thumbnail yomaleko ukubonisa imenyu ye Iipropathi zomgangatho. Ngokucinezela ibar, uya kuvula iwindow apho unakho khona hlela uhlobo lwegradient. Siza kukhetha enye yezinto ezisisiseko ze-Photoshop, leyo iya ukusuka kumnyama kuye kumhlophe.
Njengoko ubona, umbala wejezi sele utshintshile waba luhlobo lwegrey. Into esiza kuyenza ngoku iya kuba faka umbala esiwufunayo Nika into ogqibe ekubeni uyiguqule. Kwi iwindow «umhleli wegradient» owakhe wavula ngaphambili, uza kubona uxande, cofa apha ngezantsi ukuya yenza isilayida esitsha "senqanaba lombala".
Ukutyhala eso silayida, Khetha iisampulu zakho umbala ofunwayo. Unokucofa kabini kwisilayidi nakwisikhethi «sombala» faka ikhowudi, njengoko ukhetha.
Dlala ngomnyama nomhlophe
Ekugqibeleni, Siza kudlala ngegradient ukuze utshintsho lombala luhambe ngokusemandleni. Inxalenye yasekunene yoxande lwegradient, leyo inabamhlophe, iyahambelana nokukhanya kunye nasekhohlo, leyo iqulethe abamnyama, ukuya kwizithunzi. Ukuhambisa isikhethi ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye hayi kuphela Siza kuguqula ithoni yombala osetyenzisiweyo (ukuyenza ikhaphukhaphu okanye ibe mnyama), nayo Siya kuba nako ukuhlonipha izibane nezithunzi Yento esiyihlelayo ukwenzela ukuba xa ubeka umbala kumbala ungaphantsi kokuzenzela kunokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Utshintsha njani umbala kwiAdobe Photoshop ngokukhawuleza kwaye kulula
I-Adobe iveza iindlela zayo zokuqala zokumamela ngo-2021
Ezi zezona zitshixo zibonakalayo kunye zoyilo zika-2021 ngokweAdobe